CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Learning Knowledge » CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook]
1 CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 25th May 2010, 12:15 pm
CCNA နဲ့ ပတ်သတ်တဲံ စာအုပ်လေးများ ရှိရင် ကူညီ ကြ ပါအုံး ဗျာ ကျွန်တော် ရှာ တာ လုံးဝ အဆင်မပြေလို့ ပါ နော် ၊ မြန်မာ လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံး သိချင်လို့ ပါ ကူညီကြ ပါ ။
2 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 25th May 2010, 5:43 pm
ဘာ စာအုပ်လဲ နောက် ဘာမှာသုံးဖို့လဲ ဘာ အတန်းအတွက်လဲ ပြောပြလေ ရှိတော့ရှိတယ် CISCO CCNA ကို အခု ဖြေနေရတယ်လေ ကျွန်တော်က ။ Cisco ဆိုက်မှာ အကောင့်လုပ်ပြီးရင် course material ရှိတယ် ဒါပင်မဲ့ အကောင့်ခပေးရလားတော့မသိဘူး ကျွန်တော်က ကျောင်းတက်နေတာဆိုတော့သူတို့ ကဖွင့်ပေးလိုက်တာ
3 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 25th May 2010, 7:49 pm
@moeset: ရန်ကုန်မှာ Cisco Network Academy သင်တန်းပြန်ရှိပြီလား ။ Myanmer Inspiration ကဖွင့်တာလား ?
Cisco Netacad account ကသင်တန်းသားပဲရပါတယ်။ Semester4အထိmမပြီးဖူးဆိုရင် တစ်နှစ်ပဲခံတယ်။ ထင်တယ်။ မသေခြာဖူး။ ကျနော့ account က deactived ဖြစ်သွားတာ ကြာပြီ။
NetAcad က CCNA semester 1 to4နဲ့ တကယ့် CCNA ကမတူဖူးနော်။ Cisco Network Academy ကပေးတာနဲ့ Cisco Systems ကပေးတာ မတူဖူး။ Academic Certificate နဲ့ Professional Certificate ကွာတယ်။
@pooqee: Cisco Official Study guide တွေရှိပါတယ်။ ကျနော့မှာရှိတာတွေက 640-802 ပြောင်းခါစကဟာတွေ။ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဘယ် file download ကအဆင်ပြေလည်း ? Latest publish တွေရှာပေးမယ်။
4 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 26th May 2010, 1:58 pm
ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး ဗျ netacad တက်နေတာ ကွာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကွာတာလဲ သိချင်လို့ပါ
ကျွန်တော်ကွာတယ်ဆိုတာ Standard ကွာတယ်ထင်လို့ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ စံတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထားတာချင်းကွာတယ်လေ
တစ်ချို့ မေးခွန်းတွေ မှာဖြစ်ဘူးလို့ မှားရင်တော့ဆော်တီးပါ
5 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 26th May 2010, 3:08 pm
Netacad က semester တစ်ခုမှာ Certificate တစ်ခုရပါတယ်။ CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA4ဆိုပြီးတော့။ CCNA4အထိပြီးရင် Knowledge အရ CCNP အတွက်ပါ အတော်ခရီးရောက်နေပါပြီ။ Semester3မှာ OSPF တို့ EIGRP တို့သင်ပြီး Semester4မှာ External routing protocol တွေသင်ပါတယ်။ CNAP ရဲ့ CCNA Semester4ပြီးရင် CCNP ဖြေဖို့ လိုအပ်တယ့် basic knowledge တွေ တော်တော်ရနေပြီ။
ဒါပေမယ့် CCNA4ပြီးလို့ CCNA အောင်သွားပြီလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒီ Certificate တွေက Cisco Network Academy ကပေးတယ့် Academic certificate တွေပါ။ Academic certificate ပါ၊ Professional certificate မဟုတ်ပါဖူး။ Certificate တွေရဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုက CCNA 1: Networking basic , CCNA2: Routers & Routing Basics ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်။ CCNA certificate လို့မခေါ်ပါ။ Academic ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အခြေခံကအစ အသေးစိတ်သင်ပါတယ်။ Semester 1, chapter3,4လောက်မှာထင်တယ် Attenuation အကြောင်းမှာ Copper cable ပေါ်မှာ electrical charges တွေသွားပုံကိုသင်တယ်။ ဘာလို့5-4-3rules လို့သက်မှတ်လည်း၊ TCP packet တစ်ခုက ဘာလို့ 64 bits အနည်းဆုံးရှိရလည်းဆိုတာတွေ ပါပါတယ်။ ( အခုလည်းပါအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်) ။ ဒါတွေက CCNA exam official study guide မှာ၊ ဒီလောက် အသေးစိတ်ကို မရှင်းပါဘူး။ Academic မှာ အခြေခံကို အဓိကထားပေးမယ့် Professional level မှာ ဒါတွေသိပြီးသားလို့ ယူဆပါတယ်။
640-802 exam ဖြေပြီး အောင်မှ "I'm CCNA (Cisco Certified Network Associate)" လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Cisco Systems ကပေးတယ့် Certificate ကမှသာ Professional Certificate ပါ။ CNAP ရဲ့ CCNA4အောင်လို့ Cisco ID လို့ခေါ်တယ့် CSCO ID မရပါ။ Cisco Systems ရဲ့ CCNA exam ကိုအောင်မှ Cisco ID ရပါတယ်။ CNAP ရဲ့ CCNA4အောင်ထားတယ့်သူက knowledge ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းပေမယ့်၊ အလုပ်ခေါ်ရင်တော့ Cisco Systems ရဲ့ CCNA ကိုပဲ ပိုအလေးပေးပါတယ်။ CNAP က Semester တစ်ခုချင်းဈေးက CCNA exam fees နည်းပါးရှိတာပဲ၊ CNAP ပြီးရင် CCNA exam သာဖြေလိုက်ပါ။ နှစ်ခုလုံးရှိတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ Knowledge ရော လုပ်စားလို့ရတယ့် certificate ရောရှိတယ့် သဘောပေါ့။
6 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook] on 29th May 2010, 9:00 am
ကျွန်တော် လိုချင်တာ သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ပါ ရှိရင် ကူညီကြပါအုံးဗျာ အရမ်းကို လိုအပ်နေလို့ပါ နော် ဖိုရမ်က အကိုတွေ ညီတွေ အားလုံးပဲ ဗျာ
7 Re: CCNA နဲ့ ပတ်သတ်သော e-book လေလိုခြင်းလို့ [Ebook]
Free phpbb forum | Computers and Internet | Useful tricks and tips, infos | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com